ध्यान प्रेमी अभिनेता प्रदीप खड्काको फिटनेश रहस्य - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सौन्दर्य स्वास्थ्य ∕ ध्यान प्रेमी अभिनेता प्रदीप खड्काको फिटनेश रहस्य
महेश तिमल्सिना शनिबार, २०७७ असोज १० गते, ११:५३ मा प्रकाशित
एक सफल अभिनेताका लागि अभिनयको जति भूमिका हुन्छ, त्यति नै बढी भूमिका जिउडालको पनि । यिनै गुणले भरिपूर्ण छन् चकलेटी अभिनेता– प्रदीप खड्का । चलचित्र ‘स्केप’बाट सिने नगरीमा हाम फालेका खड्काले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र हिटको सूचीमा छन् । यो सबै उनको उत्कृष्ट अभिनय, आकर्षक जिउडाल र चकलेटी मुहारको राज हो । उनले पछिल्लोपटक अभिनय गरेको चलचित्र ‘प्रेमगीत—३’ प्रदर्शनको तयारीमा छ ।
२९ वर्षीय खड्का व्यक्तित्व तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै फिट र आकर्षक देखिन्छन् । दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरिसकेका खड्कामा न कुनै चिन्ता छ, न त कुनै तनाव । त्यो शान्तभाव उनको अनुहारमा झल्किन्छ । त्यसो त मनमा रिस, राग, तनाव नराखी सधैं सक्रिय र उर्जाशील भएर काम गर्ने उनको स्वभाव छ । खड्काको अनुहारमा हमेशा ताजगी झल्किन्छ । आखिर उनको फिटनेश रहस्य के हो ? फिटनेशको कुनै त्यस्तो स्पष्ट फर्मुला छ ?
खड्का बिहान ५ देखि ६ बजेभित्र उठिसक्छन् । फ्रेस भएर ४५ मिनेट ध्यान गर्छन् । ध्यानका बेला उनी गायत्री मन्त्र र नवग्रह स्तुती गर्छन् । ध्यान सक्दा ७ बज्छ । ७ बजेपछि करिब २५ मिनेट प्राणायाम, कपालभाती, भ्रामरीलगायतका योगासन गर्छन् । अनि नुहाउँछन् । यति गरिसक्दा ८ बजिसक्छ । सुटिङ परेको बेलामा भने उनको यो सेड्युअल परिवर्तन हुन्छ । तर, ध्यान भने छोड्दैनन्, उनी ध्यान प्रेमी छन् । योग ध्यान सकेपछि ब्रेकफास्ट लिन्छन् । उनको खानपान निकै सरल छ । उनी ब्रेकफास्टमा दही, कन्फ्लेक्स, हनी लिन्छन् । यो नभएको दिन पिनट, बटर, ब्राउन ब्रेड अथवा फलफूल खान्छन् ।
ब्रेकफास्ट लिएर ९ बजे घरबाट निस्कन्छन् । यसपछि उनी नियमित मिटिङ अथवा वर्कसपमा व्यस्त हुन्छन् । १२ बजे लन्च लिन्छन् । लन्चमा उनको दैनिक एउटै हुन्छ भन्ने छैन । कहिले रोटी, दाल, गेडागुडी तरकारी खान्छन् भने कहिले ढिँडो, मकैको च्याँख्ला लिन्छन् । लन्चपछि करिव ४ बजेसम्म फेरि काममा व्यस्त हुन्छन् । ४ देखि ५ बजेभित्र स्न्याक्स लिन्छन् । स्न्याक्समा कफी, चना, दुध, कुकिजलगायतका खानेकुरा हुन्छन् ।
दिनभरको काम सकेपछि उनी त्रिपुरेश्वरमा रहेको ज्यास्मिन फिटनेस क्लब एन्ड स्पामा जान्छन् । त्यहाँ ५ बजेदेखि ७ बजेको समय बडी बिल्डिङमा बिताउँछन् । त्यहाँ उनले दैनिक रुटिन बनाएका छन् । सोहीअनुसार जिम, साउना, स्ट्रेचिङ, स्विमिङ गर्छन् । जिमबाट निस्किएपछि सिधै घर जान्छन् ।
सामान्य खानपान, १२ वर्षयता शाकाहारी
खड्काको खानपान एकदमै सामान्य हुन्छ । आफू खानेकुराको पारखी नभएको उनी बताउँछन् । तर, सन्तुलित खानेकुरामा भने ध्यान दिन्छन् । ब्रेकफास्ट र लन्चजस्तै उनको बेलुकाको खानपान सामान्य हुन्छ । बेलुकाको डिनर ८ देखि ९ बजेसम्म लिइसक्छन् । डिनरमा धेरैजसो सागसब्जी, सलाद खाने गर्छन् । बेलुका सकेसम्म भात खादैनन् । खड्का शाकाहारी हुन् । माछामासु खान छोडेको १२ वर्ष भएको उनी सुनाउँछन् । ‘मैले माछामासु छोडेको १२ वर्ष भयो,’ ललितपुर कुसुन्तीमा जन्मिएका खड्का भन्छन्, ‘मलाई चना, फलफूल र सागसब्जी निकै मनपर्छ ।’
दिनभरको थकान, तनावबाट मुक्त हुन उनी खाना खाइसकेपछि १ घन्टा मूभी हेर्छन् । अथवा, कुनै स्क्रिप्ट पढ्नुपर्ने, क्यारेक्टर डेभलप गर्नुपर्नेछ भने त्यतातर्फ लाग्छन् । उनी कतिबेला सुत्छन् भन्ने ठेगान हुँदैन । तर, सुटिङ नपरेको दिनमा भने उनी ११ बजेभित्र सुतिसक्छन् ।
उनको अनावश्यक रुपमा तनाव लिने बानी छैन । अर्को कुरा उनको धेरै अपेक्षा गर्ने बानी छैन, जे छ त्यसमै रमाउने उनको आदत छ । यही बानीले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा फिट रहन मद्धत गरेको खड्का बताउँछन् । ‘धेरै अपेक्षा ग¥यो भने तनाव हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मेरो अनावश्यक कुराको अपेक्षा गरेर तनाव लिने बानी छैन । तर, तयारी भने गरिरहेको हुन्छु ।’
उनी आफूभित्र नै आफ्नो अस्तित्व खोज्छन् । आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्छन् । हरेक दिन बिहान गर्ने ध्यानले तनावबाट छुटकारा पाउन सहज भएको उनको अनुभव छ । त्यसो त उनी एकदमै हतार भएको दिनमा १५ मिनेट भएपनि ध्यान गर्छन् । ‘ध्यान गर्ने बानी परेपछि छोड्नै मन नलाग्ने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘ध्यानले कहिल्यै मुडअफ हुन दिदैन ।’
नियमित तौल जाँच
सबैकुरा मेन्टेन गरेपनि उनलाई तौल बढ्ला कि भन्ने कहिलेकाहीँ तनाव हुन्छ । त्यसैले उनले तौल नाप्नका लागि वेट मेसिन घरमै राखेका छन् । नियमित तौल जाँच्छन् । लकडाउनका कारण उनको ४ किलो तौल बढ्यो । तर, अहिले त्यसलाई ठीकमा ल्याइसके ।
अभिनेता खड्का अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नआएको बताउँछन् । ‘मेरो शरीरमा अहिलेसम्म कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो मैले खाने सन्तुलित खानपान, योग, ध्यानकै कमाल हो ।’
रक्सी, चुरोट खाँदैनन्
खड्का रक्सी चुरोटबाट टाढा छन् । उनले एसएलसीपछि एकपटक साथीहरुसँग कीर्तिपुरमा छ्याङ खाएका थिए । त्यतिबेला उनलाई बान्ता भयो । त्यसपछि उनले मदिराजन्य पदार्थ सेवन गरेका छैनन् । चुरोट त उनलाई मनै पर्दैन ।
कहिलेकाहीँ चलचित्रको सिनका लागि खानैैपर्ने बाध्यता पर्ने उनी बताउँछन् । ‘मलाई रक्सी चुरोट मन पर्दैन्,’ उनी भन्छन्, ‘चलचित्रको सिनका लागि लियो भने पनि मेरो शरीरले पचाउन सक्दैन् ।’